Mila fiovana voarindra sy matotra ny rafi-panabeazana eto Madagasikara – Blaogin'i Voniary
Mila fiovana voarindra sy matotra ny rafi-panabeazana eto Madagasikara
“Fanabeazana fototra toy inona no atolotsika ny zanatsika?” izay indray ny adihevitra nokarakarain’ny Banky iraisam-pirenena ny Alarobia 16 Mey 2018 lasa teo. Niray feo na ny mpandray anjara na ny mpanatrika ary samy nanaiky fa misedra olana goavana ny tontolon’ny fanabeazana eto Madagasikara. MITOTONGANA NY FARI-PAHAIZAN’NY ZANAKA MALAGASY ary tsy vitan’izany fa MIRORONA IHANY KOA NY FOMBA FISAINANA. Amin’ny teny tsotsotra, raha orinasa ny rafi-pampianarana dia efa nakatona satria tsy ahazoana tombony, bankiropotra! Inona ary ny vahaolana? Ny vahaolana voalohany lehibe aloha dia ny Teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana na PSE izay atolotrin’ny ministera telo misahana ny fanabeazana.
Diana Styvanley, tompon’andraikitrin’ny serasera ao amin’ny Banky iraisam-pirenena eto Madagasikara
Teny fohy momba ny pse
Mba hanatsarana ny kalitaon’ny fanabeazana dia misy fiovana telo lehibe aterakin’ny PSE.
1. Lasa sivy taona ny fanabeazana fototra
T1 hatramin’ny T9, izany hoe tsy misy intsony ny fizarana hoe EPP sy CEG fa mizara “sous-cycle” telo kosa. Misy tanjona apetraka isakin’ny “sous-cycle” ka hiova tanteraka ny fandaharam-pianarana noho izany. Amin’ny telo taona voalohany dia amin’ny teny Malagasy no ampianarana ny zaza mba hanamora ny fampitana ny lesona. Manomboka ny “sous-cycle” faharoa dia miova tsikelikely ho amin’ny teny frantsay ny teny enti-mampianatra
Kiboky mirakitra ny PSE
2. Foanana ny CEPE
Tsy misy lanjany intsony io diplaoma io nefa andanian’ny fanjakana volabe sady ajanon’ny ray aman-dreny ny zanany rehefa nahazo io mari-pahaizana io. Hisy foana anefa ny tombam-pahaizana isan-taona ijerena ny fivoaran’ny mpianatra.
3. Hovaina miandalana ny tetiandrom-pampianarana
Mba ho lasa amin’ny volana martsa ny fidirana amin’ny 2022 ary volana novambra no manomboka ny fialan-tsasatra lehibe. Hampifanarahina ny taom-pianarana amin’ny vanin-taona sy ny zava-misy eto Madagasikara no anton’izany.
Nanamarika moa ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena, Rakotojaona Lantoarintsoa, fa azo hatsaraina miandalana eny io teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana io fa tsy hoe lalàna mipetraka ka tsy azo kitihina. Ary, koa satria drafitra teknika io dia tsy miankina amin’ny resaka politika, izany hoe na miova aza ny mpitondra dia mitohy ihany ny fampiharana ny PSE.
Ny fenitra amin’ny resaka fanabeazana
Rakotondrazaka Raymondine avy amin’ny UNESCO
Ireo solontenan’ny fikambanana iraisam-pirenena dia mametraka ny fenitra iraisam-pirenena ho laharam-pahamehana hatrany rehefa misy drafitra nationa toy itony. Ramatoa Rakotondratsimba Evelyne avy ao amin’ny UNICEF dia nanambara fa ny olona nianatra dia tokony ho afaka miatrika ny fiainana, olom-pirenena vanona, mahay, misaina, afaka mandanjalanja, mandray andraikitra ary manaraka fivoarana. Ramatoa Rakotondrazaka Raymondine avy amin’ny UNESCO kosa dia namaritra fa tafiditra tsara ao anatin’ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra napetrakin’ny ONU ny tanjon’ny PSE.
Sosokevitra hanatsarana ny PSE
Efa nanatanteraka fakan-kevitra isam-paritra izay nandraisan’ny sokajin’olona maro sy tompon’andraikitra isan’ambaratonga ny ministera talohan’ny nandrafitra ny PSE. Mbola maro koa anefa ny sosokevitra azo entina anatsarana navohitrin’ny mpandray anjara sy ireo mpanatrika ny adihevitra tao, anisan’izany ireto:
Ankavia miankavanana: Rakotondratsimba Evelyne, Randrianarisoa Velonoro Clémont Hubert, Mompera Rakotonandratoniariveo Guillaume de Saint-Pierre, Francis Turbo, Lova Rabary (Mpanentana)
Anisan’ireo mahita ny olana eny ifotony i Francis Turbo, mpanentana sy mpanao hatsikana, amin’ireny fitetezam-paritra ataony ireny. Ny soso-kevitra narosony dia ny AMPANARAHANA NY FANDAHARAM-PIANARANA AMIN’NY ZAVA-MISY EO AN-TOERANA TOY NY TOE-TANY SY NY TOE-KARENA. Ohatra nalainy i Nosy Be, nosy manintona mpizahatany, tokony eritreretina noho izany ny ampidirana ny fizahan-tany sy ny fianarana teny vahiny dieny any amin’ny fanabeazana fototra.
Ny lafiny ara-kolotsaina indray no notsindrin’i Mompera Rakotonandratoniariveo Guillaume de Saint-Pierre, Pretra zezoita, talen’ny kolejy Masindahy François Xavier ao Fianarantsoa. RAFI-PAMPIANARANA MIFOTOTRA AMIN’NY KOLONTSAINA MAHA-MALAGASY hoy izy no tokony hajoro. Ireo lafiny tsy hita maso amin’ny kolontsaina izay niniana noadinoina, izany hoe ny soatoavina sy ny fanahy, dia tsara raha hampidirina ao anatin’ny fandaharam-panabeazana mba ho olona feno ireo mahavita fianarana.
Randrianarisoa Velonoro Clémont Hubert, Mpampianatra amin’ny Sekoly Fanabeazana Fototra any Mahajanga dia nanamafy fa ny FIFARIMBONAN’IREO ANDRY TELO TONTA: MPAMPIANATRA, MPIANATRA ARY RAY AMAN-DRENY, no antokin’ny fahombiazan’ny fanabeazana.
Raha vao voatonona ny hoe “fanagasiana” dia mihorona ny hodi-dohan’ny besinimaro. Efa hita tokoa ny lesoka tamin’iny fanovana ny rafi-pampianarana tamin’ny ka iriana mba hahomby ny fampiharana ity teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana izay tsara rafitra ity.
fanabeazana, fanabeazana fototra, Fanagasiana, fanagasiana ny fampianarana, Fiovana ateraky ny PSE, PSE Madagascar, Teti-pivoarana ho an'ny Fanabeazana
2 commentaires sur “Mila fiovana voarindra sy matotra ny rafi-panabeazana eto Madagasikara”
RAKOTONDRAINIBE Joseph Benjamin dit :
29 novembre 2018 à 13 h 48 min
Akory! Ny ahy izany ny mba resaka tiako hampitaina amin’ny Malagasy amin’izao vanim-potoana izao dia hoe MIFOHAZA AMIN’IZAY RY MALAGASY A! Isika mitady fiovana, filaminana, firindràna amin’ny lafiny rehetra…. Izaho hilza amintsika fa tsy hilamina intsony tompoko ity zava-misy eto amboin’ny tany ity na hanao inona isika na hanao inona…. Mba fantatsika moa hoe iza no mitondra eto ambonin’ny tany? ary Politika inona sy an’iza no napetraka teto hatramin’izay ka hatramin’izao? tsy misy hevitra hoa n’izao tontolo izao ity intsony…..MIFOHAZA ISIKA FA EFA AKAIKY NY FARANY, ndao hibebaka isika rehetra e! fa ity tsy hilamina intsony… (mbola hitohy)
Marina tokoa fa mila miova ny tsirairay!